Ajụjụ - Shandong Bohua Chemical Co., Ltd.
Ee, anyị na -achọ iwu mba niile ka ha nwee ọnụ ọgụgụ kacha nta. Ọ bụrụ na ị na -ele obere pere mpe, anyị na -akwado ka ịkpọtụrụ anyị.
Ee, anyị nwere ike ịnye ọtụtụ akwụkwọ gụnyere Asambodo nyocha / mmezi; Insurance; Mmalite, na akwụkwọ mbupụ ndị ọzọ ihe achọrọ.
Maka nlele, oge oge ihe dị ka ụbọchị 7. Maka imepụta oke, oge izizi bụ ụbọchị 7-21 mgbe ị nwetasịrị nkwụnye ego. Oge ndị isi na -adị irè mgbe (1) anyị natara nkwụnye ego gị, yana (2) anyị nwere nkwenye ikpeazụ maka ngwaahịa gị. Ọ bụrụ na oge iduzi anyị anaghị arụ ọrụ na oge ngwụcha gị, biko jiri ire gị gafee ihe ndị ị chọrọ. N'ọnọdụ niile, anyị ga -anwa ịnabata mkpa gị. N'ọtụtụ ọnọdụ anyị na -enwe ike ime ya.
Ị nwere ike ịkwụ ụgwọ na akaụntụ akụ anyị na T/T, nkwụnye ego 30% tupu oge eruo, 70% itule megide nnomi nke B/L, ma ọ bụ L/C na anya.
Ee, anyị na -eji nkwakọ ngwaahịa mbupụ dị elu mgbe niile. Nkwakọ ngwaahịa ọpụrụiche na ihe achọrọ maka nkwakọ ngwaahịa nwere ike bute ụgwọ ọzọ.